Ny fivarotana Apple dia miomana ny hifindra amin'ny lasaka plastika nentim-paharazana ho modely kitapo vaovao | Avy amin'ny mac aho
Ny iray amin'ireo zavatra nampiavaka an'i Apple hatrany dia ny firotsahana an-tsehatra amin'ny tontolo iainana sy izay rehetra manodidina azy hany ka ny vokatra sy ny serivisy vokariny dia misy fiatraikany kely indrindra amin'ny tontolo iainana.
Mikasika izany dia nandefa mailaka ny mpiasany rehetra ny foibe manazava fa hisy fanovana vaovao hapetraka ao amin'ny Apple Store amin'ny volana aprily. Hanomboka hampiasa harona taratasy izy ireo fa tsy kitapo plastika mahazatra izay ho fantatrao.
Tao anaty naoty nalefa ho an'ny mpiasa dia nanambara i Apple fa karazana harona vaovao no hampiharina, ka ireo harona plastika angano miendrika kitapo misy fantsom-pifandraisana dia hosoloana kitapo taratasy ekolojika kokoa. Ny marina dia efa somary tara izy ireo miaraka amin'ny hetsika izay efa natao nandritra ny taona maro tao amin'ny orinasa maro hafa.
Na izany aza, tara kokoa noho ny tsy misy izy izao ary ireo ao Cupertino dia hanomboka hizara kitapo taratasy hatramin'ny 15 aprily. Izy io dia karazana kitapo vaovao izay vita amin'ny fitaovana fanodinana 80% ankoatr'izay tsy dia misy akony firy amin'ny tontolo iainana miaraka amin'ny fahasimbany.
Tamin'ny fahatongavan'i Apple Watch, Apple dia nametraka maodely iray harona taratasy iray namboarina manokana tamin'ny landy miaraka amin'ny sary famantarana ny Apple Watch. Ankehitriny dia te-hanitatra ity hevitra ity ianao ary hanafoana ireo harona plastika.
Na dia mbola tsy mazava aza ny endrik'ireo kitapo fivarotana Apple dia azo antoka fa ho fiovana lehibe ho an'ireo mpankafy an'i Apple izay nanangona ireo harona plastika nampiasain'ny orinasa nandritra ny taona maro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Store » Apple Stores dia miomana ny hifindra amin'ny harona plastika nentim-paharazana ho modely kitapo taratasy vaovao
Andrés Cabrera Cuenca dia hoy izy:
Nividy tao anatin'ny 15 taona aho, mihoatra ny latsaka, macs 4, ary tsy mbola nomen'izy ireo ahy ny iray amin'ireo kitapo ireo ... Mac dia mandray antsika araka izay itiavany azy ...
Valiny tamin'i Andrés Cabrera Cuenca
Apple Pay dia nanampy banky sy orinasam-bola vaovao miisa 32